Kumhanyisa Pasi Penzira muWheelchair | Karman® Mawiricheya
Kumhanyisa Pasi Penzira muWiricheya
Posted on December 26, 2017 November 20, 2020 by csr 1687
Kumhanya mu hwiricheya
Mujaho wewiricheya hausi iwo mhando zvemujaho waungangodaro uchifunga nezvazvo. Izvo hazvisanganisi chero mota dzerudzi chero rupi zvarwo asi zvinosanganisira nyanzvi mujaho mavhiripu. Mujaho weWheelchair mutambo unonyatso kukwikwidza uye unonakidzawo kuona. Kana wakamboona Akaremara Mitambo USA wobva waziva kunakidza sei kuvaona vachiita. Zviri zvinogoneka kune chero munhu edza wheelchair kumhanya nesuper tsika wiricheya.
Ramba uchifunga mupfungwa dzako kuti pane hurema hwaunoda kuti ukwanise kuve izvo, musana kuipa, cerebral palsy, uye zvakare nevaya vasina kuona zvakanaka. Kune zvekare mamwe maratidziro aunofanirwa kuziva nezvazvo. Kana mutambi aine musana kuipa kana anokamurika mutsetse T51-T58. Kupatsanura ndeye T51-T54 kupatsanurwa kwevatambi vari kukwikwidza chaizvo mumitambo yetraki. Kana iye mutambi achishanda kubva muchiuno kumusoro saka kupatsanurwa kuri T54. Vatambi vane ganhuriro yekufamba mukati mudumbu mavo ipapo kupatsanura T53. T52-T51 ndeyevatambi vane ganhuriro yekufamba mumakumbo avo epamusoro.
Nzvimbo inozivikanwa ye mijaho yewiricheya kutora nzvimbo ndiyo Vakaremara uye yanga iri kubvira kuma1960. Kuti utore chikamu uye kudzidzisa haufanire kunge uri muchikwata asi maParalympics anoitika kuti ubate zviitiko zvinokodzera kuti upinde. Kune zvikoro zvinorega iwe uchidzidzisa padivi pechikoro timu track uye ivo vanokwanisa zvakare kuchengeta nguva yenguva yako uye nekukubatsira iwe kuenzanisa iyo nevamwe vashandisi muzvikoro zvakasiyana. Iwe unogona zvakare kudzidzisa yako simba uye kutsungirira munzira yeruzhinji. Paunenge uchisarudza ruzhinji ruzhinji ita shuwa kuti iwe unoshandisa nzira yakafanana neiyo iwe yauchakwikwidza nayo. Makwara echikoro anowanzo kuve akakwana sezvo iwo achishandiswa kune vamhanyi uye vane kubata kwakakodzera.
Ehe, iwe uchafanirwa kutenga a tsika wiricheya ingave iri zano rakanaka nekuti a wiricheya wenguva dzose haikwanise kusvika pakumhanya kwemitambo wiricheya. Edza a shamwari wiricheya kana zvichibvira nekuti iyo mavhiripu ndivo tsika kukodzera kumushandisi saka inokwana segirovhosi. Kana iyo wiricheya haina kukodzera iwe segirovhosi iwe unogona kusagadzikana uye kuita kwako kunogona kutambura futi. Google yakasiyana pezvitsiga izvo zvinogadzira izvi tsika wiricheya uye tsvagurudza sarudzo dzakasiyana kuti ugone kufara nazvo. Chiratidzo chepasi rese Invacare inogadzira makwikwi anomhanyisa mawiricheya uye inoshanda semuenzaniso kuti iwe utarise mukati. Iyo Mano Expo ichakubatsira iwe mukuona iyo tsika Mujaho wiricheya kumusoro pedyo uye pachako.
Mukupedzisa, ipa mutambo mutambo kana iwe uchinzwa kuti wakakodzera iwe. Join wiricheya Mujaho wemujaho kana chimwe chinhu chinokubatsira iwe kufambira mberi mukati maro kana chiri chinhu chaunoda kuita. Chimwe chinhu chikuru chichava bhajeti rako nekuti kuwana tsika Mujaho wiricheya haisi yakasununguka uye yakasununguka mutengo iwe mari yakanaka.
Stephen Hawking kuburikidza newiricheya
Kutyaira Ramangwana reHurema Mota